Horudhac: Crystal Palace vs Liverpool… (Rikoor waalli ah oo uu Jurgen Klopp ka heysto naadiga Palace oo taariikh u noqday horyaalka Premier League) – Gool FM
(London) 23 Jannaayo 2022. Kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaa kulan aad u xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Premier League kusoo dhoweyneysa naadiga Liverpool oo ceyrsaneysa hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Manchester City.
Kooxda ka dhisan caasimadda England ee London ayaa ku jirta kaalinta 13-aad ee jadwalka kala sarreynta horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 24 dhibcood isla markaana ciyaartay 21 kulan, halka Reds oo ciyaartay kulammadaas oo kale ay ku jirto kaalinta labaad ee horyaalka iyadoo leh 45 dhibcood,
Crystal Palace ayaa dib u heleysa weeraryahankeeda Jordan Ayew kaddib markii xulkiisa Ghana goor hore laga reebay tartanka qarammada Africa, hase ahaatee, Wilfried Zaha iyo Cheikhou Kouyate ayaa weli ku maqan tartanka AFCON 2021 ee ka socda dalka Cameroon, halka James McArthur iyo James Tomkins ay dhaawacyo ku maqan yihiin ciyaarta maanta.
Dhanka kale, Alex Oxlade-Chamberlain ayaa la filayaa inuu kasoo laabto dhaawac fudud oo kasoo gaaray kulankii ugu dambeeyay horyaalka, halka shaki la gelinayo Joel Matip oo la baddelay qaybtii nasiinnada ee ciyaartii ay Reds garaacday Arsenal ee ka tirsaneyd tartanka EFL Cup, waxaase maqnaan doona Mohamed Salah, Naby Keita iyo Sadio Mane oo qarammadooda uga qayb galaya tartanka AFCON.
Crystal Palace ayaa la garaacay sagaal kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League marka ay wajahdo Liverpool tan iyo guushii 2-1 ahayd ee ay Anfield kaga soo qaadatay bishii April ee sanadkii 2017. The Eagles ayaanan 10 guuldarro oo xiriir ah weligeed kala kulmin horyaalka Ingiriiska iyadoo la ciyaareysa hal naadi.
Guuldarradii 7-0 ahayd ee garoonkeeda kusoo gaartay kulan oo kale xilli ciyaareedkii hore ayaa ahayd tii lixaad oo xiriir ah oo ay garoonkeeda Selhurst Park kagal kulanto Liverpool iyadoo horyaalka la ciyaareysa.
Christian Benteke ayaa lix gool kaga dhaliyay Premier League naaddiga Liverpool, hase ahaatee keliya sagaal gool ayuu u dhaliyay 29 kulan oo uu horyaalka u ciyaaray Reds xilli ciyaareedkii 2015-16.
Klopp ayaa guuleystay dhammaan lixdii ciyaarood ee uu Premier League ku booqday naadiga Crystal Palace garoonkeeda – waana rikoorka macallinka kulammada ugu badan booqday hal naadi isagoo aanan wax dhibic ah lumin.
Horudhac: Arsenal vs Burnley... (Bukayo Saka oo galabta taariikh u dhigi kara horyaalka Premier League)